Indlela yokuphucula i-Instagram yakho ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayiphucula njani i-Instagram yakho
Disemba 18, 2018 0 IiCententarios 994
Akukho mithetho ikhawulezayo yokuqinisekisa ukuba las Iiposti ze-Instagram ziphucula ukuthandwa kwakho. Mnye kuphela umthetho wegolide kwaye zonke iingcebiso ezilungileyo ziqokelelwe kweli nqaku.
Kodwa ndiza kuyenza mfutshane ukuba awunalo ixesha lokuphonononga nganye yazo kwaye ndiya kutshintsha ukubaluleka ngokwento endicinga ukuba ibalulekile kwiposti ye-Instagram ngaphandle kokuhamba ngamasebe. Kwakhona Sikunceda ukwenza imali kwi-Instagram yakho.
Gcina imali ngomfanekiso olungileyo
Ayizizo zonke iimpapasho ekufuneka zilungiselelwe amakhadi eposi, konke okudingayo kukho imifanekiso elungileyo esemgangathweni ebalaselisa ezona mveliso zakho. Kanye xa kukho indawo yokuhambisa ukutya endiyilandeleyo kwi-Twitter eyenza ukutya okona kulungileyo kodwa ineyona mifanekiso ikhanyayo imbi kakhulu kwi-Instagram. Ndacinga ukuba yinto yokuchitha kwaye ndibabuza ukuba banokuziguqula iifoto zabo ngeefilita ngaphambi kokuba bapapashe. Bayenzile kwaye iifoto zabo bezimnandi ukusukela ngoko!
Nika iakhawunti yakho ye-Instagram ubuso, umntu onokuthetha naye okanye uthumele umfanekiso emva kwesigcini. Kukho isizathu esihle sokuba abantu bakhangele iividiyo zeBTS kwiYouTube ngaphambi / babukele imovie okanye umabonwakude. Abantu banomdla onjalo. Nje ukuba zikwazi ukunxibelelana nawe, zilungile. Fumana kwakhona ukuzibophelela ngakumbi kubaphulaphuli bakho.
Yibanihlekisa, yibani ngumbala onqabileyo, yiba phakathi-kwazi-be, kuba bepholile okanye nayiphi na kwezi
Ukuba awukwazi ukuhlekisa, yiba ngokungafaniyo. Ukuba awukwazi kuba nzima, fumanisa. Ukuba awukwazi ukuqhubeka, yiba nkulu. Khetha ibe nye Ngale ndlela, abantu bakukhumbula rhoqo xa uvela kwi-Instagram. Bakubona ngaphandle kwikona yamehlo abo kwaye bayazi ukuba nguwe kwaye banomdla kwakhona. Oko kuyimpawu. Siyakuxelela indlela yokuchaza amabali.
Ndazalwa ngemini nobudala xa ubiza umntu nge-protencer. Kusenokwenzeka ukuba abazali bakho bacinga ukuba likhoboka leziyobisi. Kodwa kwinyaka yedijithali, kuthetha umntu onayo inani elikhulu labalandeli kwiiakhawunti zakho zeendaba zentlalo. Ukuba unokuhlawula enye yezo Youtubers okanye i-Instagrammers ukuqaqambisa imveliso okanye inkonzo yakho, kuhle. Ukuba awukwazi, khangela umntu unokufumana ixabiso elifanelekileyo onokusebenza naye. Ukuba uza kuba ekuhlaleni, ungoyiki ukubonisana nabo.
Sebenzisa iintengiso ze-Instagram
Ngalo lonke ixesha ugcina uhlahlo-lwabiwo mali lwakho kwaye unevidiyo emfutshane etsala umdla, yiya kuyo. Ngapha koko, akufanele uchithe amawaka kwiintengiso. Xa sele wahlule iindleko phakathi kwe-Facebook, Twitter, Instagram kunye noGoogle, ungayonwabela i-ROI efanelekileyo. Into oyifunayo ukuba uyonwabele, ekupheleni kosuku, ziimpawu zamehlo.
Yenza ukhuphiswano kwaye ukhuthaze ukuzibandakanya okuhle
Imiyalezo ebonelela ngento ekrelekrele okanye elula iya kothusa nabona bantu bahle kuthi. Abanye abantu baya kuphuma kwindlela yabo yokuphumelela incwadana yokubhala, amatikiti epaki enomxholo, ibhotile yesithambiso sezandla, iholide, amatikiti endiza, okanye ipiyano enkulu. Ukuba isimahla, ababaninzi abaya kukhalaza. Kwaye, xa kuthelekiswa ne-Facebook, i-Instagram inemithetho embalwa ekufuneka ilandelwe… okwangoku.
Andinakuthetha ngokwaneleyo malunga nendlela abanye abantu abasebenzisa ngayo ii-hashtag ngokungachanekanga. Awuthumeli umfanekiso wosana lwakho kwaye usebenzise i-hashtag efana #AngieandBobsBabyisSoCute. I-1) Akukho namnye umntu osebenzisa i-hashtag, ngoko ke yinkcitho yexesha elipheleleyo (kunye nendawo); I-2) Sebenzisa i-hashtag enokukhangelwa ngabantu kwaye sele beyisebenzisa; 3) Fumana olunye upapasho olufanayo ukukukhuthaza kunye nawe njengomboniso. Unokwenza kwakhona i-hashtag yakho kwaye uyikhuthaze kuyo yonke indawo. Ndiyathetha, KUZO ZONKE IZITHUBA ukuba abahlobo bakho, usapho kunye nabalandeli basebenzise ngokunjalo. Ngoku nantso injongo ye-hashtag.
Okokugqibela, enye inketho ekhawulezayo onokuthi uyitshintshe yile Thenga abalandeli kwi-Instagram kwaye yandise iprofayile yakho ngokupheleleyo.
Ngethamsanqa kwaye wonwabe!
Siyakuxelela uyibeka kanjani i-Instagram yakho ngasese.
1 Gcina imali ngomfanekiso olungileyo
2 Fumana eyakho
3 Yibanihlekisa, yibani ngumbala onqabileyo, yiba phakathi-kwazi-be, kuba bepholile okanye nayiphi na kwezi
4 Fumana ifilosofi
5 Sebenzisa iintengiso ze-Instagram
6 Yenza ukhuphiswano kwaye ukhuthaze ukuzibandakanya okuhle
7 Sebenzisa ii-hashtag
Disemba 18, 2018
Ungayenza njani ishishini lakho ukuba likhule kwi-Instagram
Unokufumana njani ukubandakanyeka okungakumbi kwi-Instagram